Muva nje, abasebenzisi bayanda computer, laptops, amaphilisi kanye Smartphones zivune lokukhulumisana amanethiwekhi omphakathi. Kodwa akubona bonke walahlekelwa udumo futhi uxoxe amakamelo, njenge-Google Talk, WhatsApp, ICQ, Skype, IM +, Gchat + nabanye. Isikhathi esining impela kukhona isidingo ukuxhumana nomuntu othile uhla close, ngaphandle egijima amanethiwekhi nzima nezenhlalo ngaphandle kokusebenzisa semali traffic Inthanethi. Lapha ke ukophula of izingxoxo. Thina ukubhekana "Vatsapp". Kuyini lokhu?
Omunye izicelo ngenkuthalo asathuthuka "Vatsapp". Inhloso Its main - exchange of imiyalezo, ngaphandle kokuthi ukhokhe kubo njenge-SMS. Kutholakala ku-Android, i-BlackBerry, i-iPhone, Nokia kanye Windows Phone. Yini ebaluleke ukuxhumana nomunye kukhona abanikazi zonke lezi Smartphones. Isetshenziswe indinganiso imali plan Internet wakho, ngendlela efanayo e-mail kanye isiphequluli. Ngenxa yalesi sizathu, imali ehlukene ngeke bathathe umyalezo, futhi ungakwazi unomphela ukuhlala uxhumana nabangani babo nabantu ayebajwayele. Ukwethulwa "Vatsapp" Uhlelo, ukuthi kuyini, esiye sazithola.
Enye efiselekayo ukwazi amandla wabasebenzisi zohlelo ukwakha iqembu athumele inani lemiyalezo ngaphakathi ke, ividyo ne-odiyo amafayela, izithombe.
Indlela ukufaka "Vatsapp"
Ngakho, ngakho-. Unqume ukumbamba ku-smartphone yakho "Vatsapp". Kanjani I ufake le software? Into ebalulekile ukuthi manje inqubo nhlobo, nakuba kanye isicelo leso sesikhokhelwe. Uyisebenzise, uzocelwa ukuba ngumnikazi ibhuku lamakheli. Vumela ukufinyelela kusukela uhlu olwehlayo, ukhethe ikhodi yezwe lakho, faka inombolo yocingo bese uchofoza "Qeda." Hlola okufakiwe zakho bese ukucindezela "Yebo".
Ukuze ukuhlinzekwa inomboro eza SMS-ka ngekhodi ukuthi kufanele ifakwe ewindini elivelayo. Manje siza phezulu bese ubhala igama uzobona interlocutors yakho. Silondoloze. Okulandelayo sithola ithuba bamise oxhumana ifonibhuku ohlelweni ukufakwa.
Lokho ukusetha "Vatsapp". Bhalisa wazibonakalisa lula. Lokho kuyinto - bawuqonda. Manje ukhetha oxhumana naye oyifunayo umthumele umlayezo. Uma ufisa ukuthumela isithombe, ividiyo noma oxhumana naye, chofoza umcibisholo eduze umugqa input bese ukhetha umyalezo oyifunayo e ohlwini oluvelayo.
Izinzuzo "Vatsapp" phezu ezinye izithunywa
Hlela ukuthi yini nokuthi "Vatsapp" kanjani ukusebenzisa lolu hlelo, udinga ukukhumbula mayelana zako ukunikela abanye. Eyisisekelo kunazo:
Ukuswelakala kokusebenza ngokuhlanganyela amaphasiwedi ungene, ikhono ukuthumela imiyalezo kanye namafayela.
Qondisa inombolo yakho yocingo futhi ukuhlanganiswa ifonibhuku.
Uhlelo i-iPhone kunezinzuzo eziningi.
Ngisho ngenkathi izula, ungakwazi ukudlulisa amafayela nge 3G noma Wi-Fi.
Isekela ezisekelweni mobile ezahlukene eziningi.
Easy ukufaka lolu hlelo.
Ukuba khona push-izaziso, okuyinto ukusebenza ngisho ngesikhathi lapho isithunywa ivaliwe.
Ikhono ukusetha avatar ozithandayo yephrofayela yakho.
Ekuqaleni kubhekwe uhlelo ingafakwa kuphela ku-iPhone. Ngemva kwesikhathi esithile nge yesikhulumi java isibe kungenzeka wembatha ezinye omakhalekhukhwini kanye Smartphones. Manje ungalanda "Vatsapp" ye-PC kanye laptop.
Inani zezinkinga zazimi kanje. Isilayezi ukukopishwa ibhuku lamakheli oxhumana nabo ohlwini lwakho, kodwa umsebenzisi umazisi wathola izinombolo zocingo. Ngesikhathi esifanayo SIM khadi inombolo kokuthola ngemvume, kanti nawe uthola imiyalezo kubasebenzisi. Akudingi lutho yokubhalisa, kusukela Izigijimi zaziwusizo ngesimo lokusebenza SMS, kodwa ushibhile kakhulu.
Ngakho, "Vatsapp" Uhlelo - kuyini? Lokhu isithunywa, ngubani uqala kwalawo ukuthandwa "quipu" yalo, "ICQ" futhi "Skype".
Ngingayithola ukufaka "Vatsapp" ku aypad
Naphezu kweqiniso lokuthi iPhone futhi aypad - imikhiqizo ye inkampani efanayo, ne ukufakwa kwesicelo yethu kudivayisi yesibili, kuze kube muva nje, kwakunezinkinga. Jailbreak edingekayo. Manje lolu daba luxazululwa. Ukuze sikwazi ukufeza lokhu sidinga: self aypad, iPhone (isicelo sokubhalisa) ne-computer. Ngesikhathi esifanayo ngabandayo ngokuphelele, ngaphansi kwaziphi yesistimu yokusebenza siphela PC. Lokhu kungase kube i-Windows, kanye OS X. I umehluko ukufakwa incane ukuze indiva.
Sithanda ukuthi unolwazi ngalokho le ndlela ngokuphindaphindiwe ihlolwe futhi cishe ngokuphelele efanelekayo egijima iOS7, eziqala iOS 4.3. Manje usukulungele.
Setha "Vatsapp" ku aypad
inqubo yethu nge "Vatsapp" ngoba aypad eyenziwa ngezigaba futhi siqukethe izinto 12:
Into yokuqala ukusungula iFunBox - ukuphatha amafayela phakathi Apple kanye namadivayisi PC. Ungalanda it kusuka indawo yakhe.
Khona-ke ukusebenzisa iTunes bomdabu, iya ku-App Store futhi ukulayisha isicelo kwesokudla "Vatsapp".
Thola ifayela elandiwe ku-PC yakho, ngiyibeke phezu desktop yakho.
Ukuxhuma ithebhulethi ikhompyutha futhi ugijime iFunBox kwimenenja yefayela.
Chofoza inkinobho "Faka uhlelo lokusebenza". Ku-window esivula, udinga ukucacisa ifayela "Vatsapp" kusukela kudeskithophu uyivule usebenzisa inkinobho esikhethekile. Ngenxa lolu hlelo ngokusebenzisa iFunBox ke kuzolandelwa idivayisi. Khumbula ukuthi ngaphambi kokuba ubhalise gijimi kumelwe kudlule inqubo ukusebenza.
Ukuze wenze lokhu, vula ku-PC yakho Tablet futhi kusebenze ngosizo SMS-imiyalezo nge iPhone.
Manje qiniseka ukuxhuma kukhompyutha igajethi efanayo ukwenza kusebenze isicelo.
Ohlangothini lwesobunxele iFunBox ukhethe exhunywe yefoni kwesigaba ifayela Umsebenzisi Isicelo, ngakwesokudla - "Vatsapp".
Sifuna kumafolda amabili, Library kanye Imibhalo, futhi ukopishe ukuba kudeskithophu.
Ngemva kokuphothulwa ukusebenza ikhophi ukuvimbela iPhone ukusetshenziswa kanye nedivayisi lethu elisha, isivele ifakiwe "Vatsapp".
Nakulokhu futhi, udinga ukusebenzisa umphathi iFunBox. Kwesokunxele, khetha idivayisi yakho, futhi eyaziwa kithi kakade ihlukaniswe Umsebenzisi Isicelo. Kwesokudla - "Vatsapp".
Ekugcineni susa amafolda anamagama Imibhalo Library, bese ukopisha lwemibhalo ezimbili ukuthi yayikade ibekwe kudeskithophu.
Dreary kwenziwe ngaphandle jailbreaking futhi manje ukusebenzisa lolu hlelo ngaphandle inkinga.
Iziphetho ukusetshenziswa isithunywa
Kuleli qophelo ngesikhathi isethwe kuphela kumadivayisi "Android" izinguqulo "Vatsapp" angaphezu kwezigidi ezingu-500. Kuyini, ukwazi izigidigidi zabasebenzisi umhlaba jikelele. izinhlelo kungaba ukuziqhayisa a udumo onje. Ukuze konke okungenhla ukusebenza isithunywa, ungakwazi ukwengeza kanye nokwenzeka ukulawula komzali. Okungukuthi, ungakwazi ukugcina ithrekhi yazo zonke izincwadi zokuthi ingane yabo, lokho Amafayela elamukelayo futhi ithumela. Ukuze wenze lokhu, udinga ukufaka i eyodwa ozikhethela izinhlelo ezikhethekile. Futhi, owakwakhe ungakwazi ukulandelela nomunye, ngoba izicelo okubonakalayo kumsebenzisi. Kodwa lapha sidinga ukunemba kakhudlwana.
Ngokuvamile, "Vatsapp" abantu abaningi umdumise, aneliseke ukusetshenziswa kwalo. Phakathi amaphutha Kumele kuqashelwe ukuthi kubalulekile ukulanda uhlelo ngokucophelela, ustochnikov olusemthethweni kuphela, njengoba kungenzeka ukuthola igciwane noma "uthole" imali. Futhi, abasebenzisi bakhononda ngokuthi njalo sidinga uxhumano Inthanethi. Nakuba kakhudlwana futhi le nkinga kuba lula.
Magic inoveli "The Black Hen, noma Ukuphila Underground". isifinyezo